Ukhetho olufanelekileyo lweenoveli zolwaphulo-mthetho
Uphengululo lwenoveli yolwaphulo-mthetho
Icebo likaJean Hanff Korelitz
Ukuphanga ngaphakathi kophango. Ngamanye amazwi, andifuni ukuthi uJean Hanff Korelitz ubile kuJoel Dicker inxalenye yembali yakhe kuHarry Quebert oye waziba iintliziyo zethu ngokuchanekileyo. Kodwa ukungqamana kwesihloko kunento entle yokudibana phakathi kwenyani...
I-Alaska Sanders Affair nguJoel Dicker
Kuncinci okuseleyo ukuba sikwazi ukuzintywilisela kwiJoel Dicker entsha. Yaye xa oko kusenzeka ndiya kudlula ukuze ndinike ingxelo ngoko ndikufundileyo. Kwasekuqaleni, iAlaska Sanders Affair inikezelwe kuthi njengolandelelwano. Kodwa sele sisazi ukuba uDicker ubachitha njani ephinda amabali amatsha…
Uloyiko nguJames Ellroy
Izithuba zokujongana nebhayografi okanye ubuncinci imbonakalo yesicatshulwa kwihlabathi lomlinganiswa ngokulandelelana, kungcono ukuphathisa umbandela kumbhali wenoveli kunombhali webhayoloji owaziwayo. Kwaye akukho mntu ungcono kunoJames Ellroy ukuba abhale ezo ziqwengana zobomi phakathi kwezinye izibane kunye nezithunzi ezininzi… Malunga…
Umntwana, nguPablo Rivero
Umba weintanethi zentlalo kunye nenzonzobila yazo iqingqelwe kumbono omtsha. Kuba ayizizo zonke izinto ezinokubakho enzonzobileni malunga neenethiwekhi zentlalo. Ngapha koko, ndingathanda ukubona eli lizwe lethu langoku livalelwe ngaphandle kwe-whatsapp embi esinokuncokola nayo kwiqela okanye ...
Ivumba Lolwaphulo-mthetho nguKatarzyna Bonda
EPoland ngokuvuselela indlalifa yeemfazwe ezishushu okanye njengesitya esibandayo kwintshayelelo nokuphuma kweMfazwe Yehlabathi yesiBini, ilizwi elifana nelikaKatarzyna Bonda (elinokuthelekiswa nelethu. Dolores Redondo), iphuma ngamandla. Ukuqina okudidayo kwabo bazama ukudibanisa...
Siqala ekugqibeleni, nguChris Whitaker
Ngamanye amaxesha uhlobo olumnyama luthatha intsingiselo enqanda kwizinto ezikhoyo. Amatyala afana nala kaVíctor del Arbol, okwaziyo ubunzulu obunzulu kakhulu ukusuka ekungeneni kwabalinganiswa bakhe. Kwenzeka into efanayo nalo mbhali, uChris Whitacker ofika nenye inqaku lonxibelelwano olungathandabuzekiyo kunye…
Isichazi-magama esinomdla seNoveli emnyama, nguPierre Lemaitre
Uhlobo lwenoir namhlanje sesinye sezona ziseko zinamandla zoncwadi lwangoku. Amabali olwaphulo-mthetho okanye aphantsi komhlaba, iindlela eziya kwiiofisi ezimnyama ezilawula imijelo edumileyo, amapolisa okanye abaphandi abashiya ulusu lwabo ukuze basombulule awona matyala aphazamisayo. Kwaye uPierre Lemaitre ngomnye wabo ...
Izinja ezijonge esibhakabhakeni, nguEugenio Fuentes
Ekubeni uRicardo Cupido wazalwa njengomlingiswa kwiminyaka yokuqala ye-90, uhambo lwakhe ngenxa yezenzo zolwaphulo-mthetho lwenze ukuba iqhawe lethu libe yinto ebalulekileyo kumsebenzi wamapolisa wendabuko wase-Iberia. Uhlobo olumnyama lwaseSpain, njengeTaliyane okanye isiFrentshi, luthandwa ...
Okuninzi Akonelanga, nguMartín Casariego
Emva kweminyaka embalwa enezithunzi ezininzi kunezibane phakathi kweColombia, iMexico kunye ne-Iraq, uMax wabuyela eMadrid ngo-2004. Kwi-bar, isixeko kunye nenkumbulo ka-Elsa iya kuwela phezu kwakhe, xa efumanisa umfanekiso oqingqiweyo weBastet owawuhombisa i-El Blue. ikati. Apho uya kumfumana ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha24 Elandelayo →